Nooca labaad ee RC ee macOS Big Sur 11.2 | Waxaan ka socdaa mac
Si lama filaan ah oo suurtagal ah in lagu saxo cillad ku jirta Sii deynta Musharaxa maalmo yar ka hor, Apple ayaa sii daayay nooca labaad ee beta beta ee macOS Big Sur 11.2 Isniintii. Waa wax lagu qoslo maxaa yeelay noocyadan noocyadu waa sida nooca ugu dambeeya oo badiyaa mid aan ka badnayn ayaa la sii daayaa si loo dhigo aasaaska. Nooca xiga ee RC ka dib caadi ahaan waa nooca ugu dambeeya ee dhammaan adeegsadayaasha In kasta oo aysan jirin wax lagu degdegayo in la soo saaro nuqulkan kama dambaysta ah, haddana waxay umuuqataa wax lala yaabo inay billaabeen laba nooc oo ah Musharraxa sii-daynta ah ee is-xigxiga.
Halyeeyadaas badan waxay ogyihiin in noocyada RC Iyagu waa Master-kii hore ee Dahabka ahaa (GM) bilaabay Apple wax yar uun ka hor qoraalkii ugu dambeeyay. Beddelka magac-bixinta ayaa goor dhow lagu daray, in kasta oo aanu runti saamayn ku lahayn natiijada kama dambaysta ah, taas oo ah soo saarista nooc rasmi ah oo ku saabsan nidaamka hawlgalka ee su'aashu ka taagan tahay.
Sida ku cad qoraalada labaad RC version La sii daayay tan waxaa ka mid ah hagaajinta cilladaha soo socda: Bandhigyada bannaanka waxaa laga yaabaa inay muujiyaan shaashad madow markii lagu xiro Mac mini (M1, 2020) iyadoo la adeegsanayo qalab lagu beddelayo DVI ilaa HDMI. Tafatirka barnaamijyada 'Apple Photos ProRAW app' kuma keydin karaan iCloud Drive iyo wixii kale ee hagaajin ah. Cilladaha go'an ee Nidaamka Xulashooyinka ee aan u oggolaanayn gelitaanka maamulka ama cilladaha Emoji.
Dayactirradan waxaa horey loogu sii daray qaybtii hore ama ugu yaraan wax la mid ah. Waxa cad waa in ay muhiim tahay in aan lagu rakibin noocyadan beta kumbuyuutarrada waaweyn tan iyo markii loogu talagalay kuwa horumariya sidoo kale waxay sababi karaan iswaafaq la'aanta qaar ka mid ah qalabka ama barnaamijyada aan u isticmaalno nolol maalmeedkeena. Waxaa la filayaa in nooca ugu dambeeya uusan qaadan doonin waqti dheer in si rasmi ah loo daabaco Waan arki doonaa inta ay Apple ku qaadanayso inay soo saarto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Big Sur » Nooca labaad ee RC ee macOS Big Sur 11.2
Hadda waxaad arki kartaa filimka "Palmer" ee uu jilayo Justin Timberlake